बुमरैgsहरू: कसरी निर्माण र त्यसलाई सुरू गर्ने - Ikkaro
बुमरै What भनेको के हो?
बुमेरा्ग एक वस्तु हो जुन, फ्याके पछि, यसको विशेष बिन्दुमा फर्कन्छ र यसको विशेष प्रोफाइल र सुरुवात आकारको कारण। कुनै सामग्री बुमेरंग निर्माण गर्न मान्य छ: काठ, प्लास्टिक, गत्ता, कार्बन फाइबर, एल्युमिनियम, आदि।
बुमरै How कसरी काम गर्दछ
तिनीहरूले लगभग कुनै पनि आकार लिन सक्दछन् र सुरूवात गर्नुपर्दछ ताकि तिनीहरू आफ्नै अक्षमा घुमाउँनेछन्। हावामा लिफ्ट ब्लेडको आकारको कारणले हो, जुन विमानको पखेटा जस्तो प्रोफाइलसँगै हुन्छ। हावालाई "हमला गर्दै" बुमेरrang्ग आफैमा फर्कन्छ र यात्रा गर्दछ। विस्थापनको बाटो लाईरियर वेग र वेगबाट स्वतन्त्र हुन्छ जुन यो आफ्नै अक्षमा घुमाउँदछ र प्रत्येक बुमरै in्गमा स्थिर हो। यो हुन्छ किनकि बुमेरrang्ग आफ्नो अक्ष र घुम्ने क्रममा घुमाउँदा ब्लेमले त्यस बूम्रेrang्गको आन्दोलनको दिशामा घुम्दछ जुन त्यस समयमा विपरित दिशामा घुम्ने एक भन्दा बढि समर्थन गर्दछ, जसको लागि यस अर्थमा टोक़ उत्पादन गरिएको छ वा जाइरोस्कोपिक प्रीसेसन।
बुमरेgs्गमा यति धेरै संख्यामा ब्लेडहरू हुन सक्छन्। ब्लेडहरू उस्तै वा बुमेरांग सममित हुनु हुँदैन; त्यहाँ बुमर्याgs्गहरू भि, डब्ल्यू, जस्तो आकारका छन्, तीन ब्लेडको साथ, ब्लेडहरू वितरित गरिएको हेलिकप्टरको ब्लेडहरू जस्तै, काang्गरू, कछुवा, माछा, आदि जस्ता आकारका। हाल बुमेरांगको खेलकूद प्रयोग धेरै नै व्यापक छ, त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय च्याम्पियनशिपहरू छन् जहाँ मोडलीयालीले यसलाई समात्ने तरिका, फिर्तीको सटीकता, उडान समय, एक निश्चित समय वा दूरीमा "क्याचहरू" को संख्या धेरै उदाहरण दिनको लागि, फर्कनु अघि टाढा सर्छ।
बुमेरंग भनिने सबै कलाकृतिहरू सुरुवातकर्तामा फर्किदैन: अष्ट्रेलियाली आदिवासीहरूले शिकारको लागि प्रयोग गरेका ती फर्किएन र तिनीहरूको नाम बुमेराrang थिएन, तर काइली हो।
फिर्ती बुमेराgs्गहरू शिकार वा युद्धको लागि कहिले प्रयोग गरिएको थिएन। काइलीले प्रयोग गर्न छोडे जब धनुष र एर्रो जस्तो अन्य शिकार कलाहरू लागू गरियो।
बुमर्याgsहरू अष्ट्रेलियामा अद्वितीय छैनन्; सबैभन्दा पुरानो हो कि मिति मा सक्षम हुन पोल्याण्ड मा १ 1987 in20.000 मा फेला परेको थियो र यसको उमेर २०,००० बर्ष भन्दा बढी छ। तिनीहरू पाँच महाद्वीपमा फेला परेका छन्, त्यहाँ तिनीहरू पनि Tutankhamun को चिहानमा थिए, भन्दा बढी तीन हजार वर्ष पहिले।
पुरातन इजिप्टमा बुमर्याgs्गहरूलाई दिइएको मुख्य प्रयोग ह्यान्डगनको रूपमा थियो।
कसरी काठको मीटरको साथ बुमेराrang बनाउने
हो; मलाई थाहा छ कि भिडियो अ English्ग्रेजीमा छ, तर यो तपाईंले देख्नु भयो भने यो बुमरैrang निर्माणको प्रक्रिया पूर्ण रूपमा बुझ्नुहुनेछ, ... पढ्न जारी राख्नुहोस्
पियरे कुटेक द्वारा बुमेरांग ब्लुप्रिन्टहरू
निम्न लि the्क बुमेराrang संसारमा यति प्रभावकारी छ कि मलाई लाग्छ कि यो यो हाइलाइट गर्न पोष्टको योग्य छ।
जो म जस्तो सुरु हुन्छन्, वा जिज्ञासु छन्, एक नजर हेर्नु पर्छ। Boom विशेषज्ञहरु निश्चित रूप मा यो थाहा छ, तर यो सन्दर्भ को एक सामान्य स्रोत हो।
यो वेब हो पियरे कुटेक जहाँ हामी सयौं उपलब्ध योजनाहरू सहित बुमेराrang्ग योजनाहरूको डाटाबेस भेट्टाउन सक्छौं
कुनै श .्का छैन बुमरैgs्ग शटको उत्तम संकलन जुन तपाईं इन्टरनेटमा फेला पार्न सक्नुहुन्छ।
सीडी वा डीभीडीको साथ बुमेराrang
तिनीहरू भन्छन कि अज्ञानता साहसी छ…। र यसको प्रमाण मेरो प्रयास हो एक सीडीको साथ बुमेराrang निर्माण गर्नुहोस्, जुन पूर्ण असफलतामा परिणत भयो।
तर मेरो नामको लागि धन्यबाद जसले ब्लग खोलेको छ, बुमेरालिया अत्यधिक सिफारिश गरिएको छ, हामी योजना र बुमेरंगको प्रोटोटाइप सीडीको साथ देख्न सक्छौं।
र म CD / DVD प्ले गर्न अधिकार लिन्छु
यो एक छ स्टेनिस्लास बूम, म अझै पनी जान्दिन कि ऊ को हो र जसको मँ केहि सन्दर्भ चाहान्छु
सीडीको साथ बुमेरांग निर्माण गर्नुहोस् (असफलता)
केहि समय अगाडि मैले पढें कि तपाईं सीonconstructing एक सीडी को उपयोग गरी बुमेराrang्ग, र यो कि 1 मीटरको त्रिज्याको साथ उडान गर्न सम्भव थियो र मैले यसलाई परीक्षण गर्नुपर्‍यो।
केहि भन्दा पहिले र म पछाडि अघिल्लो विफलता एक बुमेरांग निर्माण गर्न मैले तपाईंलाई चेतावनी दिनु पर्छ कि यो एक पनि उडान भएको छैन।
बुमरै Building निर्माण गर्दै १
म लामो समय देखि चाहन्थें मेरो आफ्नै बुमर्या make बनाउनुहोस्। त्यहाँ विस्तृत योजनाहरू र प्रयोग हुने सामग्री र निर्माण मार्गको बारेमा स्पष्टीकरणको साथ वेबसाइटहरू छन्।
तर जहिले जत्तिकै, मैले मेरो टाउकोमा के राखें त्यो प्रमाणित गर्नुपर्‍यो, र अनुभव गर्न यद्यपि धेरै मानिसहरूले यसको बिरूद्ध सल्लाह दिएका थिए।
म यो पोष्ट प्रकाशित गर्न जाँदैछु, तर कसरी त्रुटिहरू पनि निर्भर गर्दछयहाँ छ सेतो टेल टुमर बुमरै build निर्माण गर्ने प्रयास गर्नुहोस्.
विचार धेरै सरल छ। मसँग एउटा ... छ बूमेरंग, म यसबाट एउटा मोल्ड बनाउँछु र त्यसपछि म यसलाई सेतो ग्लुले भर्दछु।
कसरी बुमेराrang्ग फाल्ने
यद्यपि यस ब्लगमा सामग्रीहरू मूल हो वा हाम्रो थपको साथ, हामी यो लेख पोष्ट गर्न कसरी अप्ठ्यारो पार्दछौं बुमेरrang्ग फ्याक गर्न जुन मलाई लाग्छ तिनीहरू सबैलाई आवश्यक छ जुन यो शौक / खेलमा सुरू गर्न चाहन्छन्।
यहाँ यो जान्छ ...।
बुमरलियाबाट लिइएको लेख र फोटोहरू। जहाँबाट तिनीहरूले लेख को प्रजनन अनुमति।
तपाईले मनपराउनु भएको जस्तो तपाईलाई सजिलो हुन्छ बाहिरी भागमा। फाल्दालाई फरक पर्दैन, चाहे यो दुई औंलाले होस् वा पूरै हातको साथ। तपाईं सक्षम हुनु पर्छ
धेरै कठिन यसलाई अगाडि धकेल्नुहोस्
यसलाई पर्याप्त रोटेशन दिनुहोस्, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र गाह्रो कुरा भनेको यो रोटेसन प्रिन्ट गर्नु हो
हामी समात्नेछौं बुमरैrang हामी चाहानुहुन्छ, जब सम्म फ्ल्याटको बाहिरी भाग हुन्छ र घुमाउरो भाग हाम्रो अनुहारको नजिक छ। हामीले बनाउने कुनै पनि ग्रिपले कार्य गर्दछ जब हामी त्यसलाई पर्याप्त बल दिन्छौं। बुमरै the शूटरतर्फ उत्तल भागले समात्यो। समतल भाग सधैं बाहिरतिर। यो स्केच दाहिने हातको हो
बुमेरा Building निर्माण र उडान गर्दै
प्रयास गराैँ एक बुमेरा build निर्माणयद्यपि आधारभूत, योसँग एक उत्तम उडान छ र हामीलाई एरोडायनामिक्सको बारेमा चीजहरू सिकाउँदछ जुन हामी अन्य प्रोजेक्टहरूमा लागू गर्न सक्छौं।
बुमरै What भनेको के हो? मूल रूपमा यो एक पखेटा हो जुन यसको आकार, यसको प्रोफाइल र हामीले गर्ने प्रक्षेपणको कारणले गर्दा, हामी यसलाई उडानमा पाउँछौं र हामीमा फर्कन्छौं। किन यस्तो भइरहेको छ? वि the्ग प्रोफाइलहरूको पर्याप्त मात्रामा मोडलिंग गरेर हामी माथिल्लो भागमा तल्लो चाप र तल्लो भागमा उच्च उत्पादन गर्न सक्षम भयौं, जसले गर्दा लिफ्ट प्रभाव भन्ने कुरा सिर्जना गर्ने "यो यस्तो देखिन्छ कि यदि हामीले गुरुत्वाकर्षणको व्यवहार बदल्‍यौं"। यी सबै मुद्दाहरू हुनेछन्। अर्को लेखमा कल गर्न सकिन्छ भनेर राम्रोसँग व्यवहार गर्नुहोस् विमानहरू किन उडान गर्छन्?